Sida loo Delete / Messages Clear ku iPhone
Helay farriimo aad u tiro badan Dhawaqa ilaa aad iPhone oo waxaa lagu samaynta Messages aad app sugayay oo dhan ayay qaabkii? Waa hagaag, nasiib wanaag la iPhone, tirka fariimaha jirka waa mid aad u fudud oo aad samayn kartaa waqti oo dhan iyo xataa laga dhiso si toos ah u dhacaan.
Waa taas oo keliya ma aha hab aad u wanaagsan oo aan ka walwalin in farriimo aad u tiro badan la rabin is kaydiyaa aad iPhone laakiin sidoo kale waa mid ka mid hab kale oo lagu badbaadinayo on kaydinta qaaliga ah ee aad ka qabto qalab macruufka.
Qeybta 1: Sidee si toos ah u tirtirto fariimaha jir iPhone
Qeybta 2: Sida loo tirtiri fariimaha badbaadiyey joogto ah ka iPhone
Qeybta 3: Isticmaal tallaabooyinka sida hoos si ay u tirtirto fariimaha hore tirtiray on iPhone joogto ah
Qaybta 4. Sidee in ay tirtirto farriimo badan oo ka iPhone
Halkan sida ay si toos ah u tirtirto fariimaha jir iPhone.
Talaabada 1: Ka bilow Settings app ka dibna riix Messages.
Talaabada 2: Hadda, jaraa'id oo fursad u dhig Messages in aad ka heli doonto hoos Message qaybta History.
Talaabada 3: Dooro oo tirada maalmahaaga (1 sano ama 30 maalmood) ka dib markii taas oo aad rabto lahaa macruufka in ay tirtirto fariimaha aad si toos ah.
Talaabada 4: Oo u tallaabada ugu dambeysa, jaraa'id oo fursad u tirtirto si loo xaqiijiyo socodka ah ee tirtirka automatic weerarka.
Inkastoo ay jiraan siyaabo badan oo la tirtiro Fariimaha lagu kaydiyaa aad iPhone, kuwa caadiga ah ma run ahaantii ka dhigi fariimaha tirtiray Mareeykan ah. Taasi waa xaq, qof kasta oo ku filan oo ah aqoon farsamo ama arrintan ku hubeysan software saxda ah mar walba soo kaban karto Fariimaha lumay ee aad iPhone iyo in aanu ka dhawaajin sida wax aad u wanaagsan.
, Sidaas daraaddeed si aad u hubiso in aad u baahan tahay ka welwelin ku saabsan is geliyey abid xaaladan, waxaan rabnaa in aan aad u soo bandhigo in software tirtire ugu fiican xogta iPhone sameeyay iyo macneeyeen yaqaan, ee SafeEraser Wondershare . Waa mid ka mid ah software ugu fiican ee aad ka heli karto gacmahaaga maanta oo ay u isticmaalan in ay tirtirto dhamaan fariimaha aad iyo macluumaad kale oo aad u ah ammaan iyo khatarta hab xor ah 100%. Halkan waa liiska astaamaha in codsigan nifty faaniyaa:
1 Click Nadiifinta - Ma rabtaa inaad nadiifiso junk oo dhan in aad iPhone iyo in sidoo kale la kaliya hal click? Waa hagaag!
Photo hawadda - cadaadi photos weyn xajmi qabtay adiga oo isticmaaleya isticmaale iPhone tayada sare,.
Masixi Data Private - iibi ama dib u telefoonka jir ah oo aan ka werwerayn oo ku saabsan xatooyo aqoonsiga abid.
Masixi tirtiray Files - Waxaa la iman technology ay isticmaalaan US Military si loo hubiyo in xogta la tirtiro aad iPhone waa weligiis tirtirayaa aan wax raad ah.
Masixi All Data - Delete dhammaan xogta aad iPhone oo aan haysan si ay u soo celiyaan qalabka si aad u goobaha warshad ama jidka u mar kale soo afjarno socda.
Sidaas darteed haddii aad hadda aragto, Wondershare SafeEraser yahay kaliya qalabka user kasta oo ka walaacsan ammaanka xogta isaga ama iyada abid u baahan tahay iPhone. Halkan sida loo isticmaalo.
Talaabada 1: Burcad SafeEraser ka dib markii aad si guul leh u rakibay oo la doorto ikhtiyaarka ah masixi Private Data.
Talaabada 2: SafeEraser haatan bilaabi doonaan dhowr qalab aad si toos ah iyo sidoo kale aad u muujiyaan horumarka scan.
Tallaabada 3: Marka iskaanka la sameeyo in dhowr daqiiqo, SafeEraser qor doonaa dhammaan xogta gaarka ah ee ay shaashadda. Waxaad markaa dooran kartaa fursad aad ku 'Messages' ka dhinaca bidix kadibna riix badhanka 'masixi Hadda'.
Talaabada 4: SafeEraser ku weydiin doonaa inaad hadda in aad rabto in aad dhammaan xogta ku fariimaha aad tirtiray xaqiijin, si nooca in 'tirtirto' oo guji badhanka 'masixi Hadda' mar kale.
Talaabada 5: Marka xogta la tirtiray, waa in aad aragto shaashadda la mid ah mid ka mid ah sawirka hoos ku qoran la siiyay.
Talaabada 1: Press on fursad u masixi tirtiray Faylal ay ka interface ugu weyn ee SafeEraser app.
Talaabada 2: Hadda app waxay bilaabi waa baar qalab aad loogu talagalay dhammaan xogta la tirtiro dibabaxayaal ama hore ay ka mid yihiin fariimaha aad.
Tallaabada 3: Marka, iskaanka la sameeyo waxaa muujin doonaa dhammaan faylasha xogta in la helay ay ku jiraan farriimo ah. Waxaad hadda calaamadee karo Fariimaha iyo sidoo kale macluumaad kale haddii aad rabto oo dhan oo iyaga ka mid joogto ah tirtirayaa ka dibna riix badhanka on masixi Now.
Talaabada 4: Tani waa markii app aad keeneysaa in si ku qor in 'tirtirto' si aad u cadeyn karo hadii aad u rabto in aad si joogto ah u tirtirto fariimaha aad dibabaxayaal iyo macluumaad kale.
Talaabada 5: Marka Kabcada_ dhamaato, SafeEraser aad u xaqiijin doona in sidoo kale la daah ah sida hoos ku qoran.
Masixi tirtiray iPhone Message Video Tutorial
Qeybta 4: Sida loo tirtiri farriimo badan oo ka iPhone
Haddii aad rabto in aad masixi farriimo badan oo ka kala xiriir telefoonka idinkaa iska leh ee ah laakiin ma doonayo in wadahadalka oo dhan tirtiray, waxaa jira hab aad samayn karto in sidoo kale la isticmaalayo iPhone. Si fudud raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo iyo in aad sameyso wanaagsanyahay.
Talaabada 1: Tag Messages app aad screen iPhone Guriga.
Talaabada 2: Haddaba, xulo xiriir ah oo farriimo aad rabto in aad tirtirto.
Talaabada 3: Hadda, saxaafadda iyo ceshato fariin aad rabto in aad tirtirto ilaa aad ka hesho soo socota ee fursadaha ka dooro mid ka mid ah oo oranaya 'More'.
Talaabada 4: Sida ugu dhakhsaha badan ee aad xulan 'More', waxaad arki doontaa goobo yar yar ee soo socda in dhamaan fariimaha ka xiriirkaas. Hadda waa wakhtigii la calaamadee kuwa aad dooneyso in aad tirtirto adigoo riixaya on goobooyinkan.
Talaabada 5: Hadda, si fudud u riix qaybta ah 'Message tirtirto' hoose ee shaashadda si ay u tirtirto xaqa ah fariimaha aad calaamadeeyay.
Sida loo dayactir iPhone qoyan ku le'atay in Water
Solutions Full in "Raadi My iPhone" Dhibaatooyin
Sida loo Delete Videos ka iPhone (iPhone 5s iyo 5c iPhone mid)
> Resource > iPhone > Sida loo Delete / Messages Clear ku iPhone